စာတွေဖတ်ကာ ရသတစ်ခုခုရသွားရင် ကျေနပ်ပါတယ်
သည်ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဘကြီးအောင်ကို မသိသူမရှိသလောက်ဘဲ……။ ဘကြီးအောင်ဆိုတာကလည်း… ဒီမြို့နယ်လေးမှာပဲ မွေးခဲ့တာဆိုတော့…. လူဟောင်း၊လူသစ်အကုန်သိနေတာပေါ့…..။ ဘကြီးမှမဟုတ်ပါဘူး..။ ဘကြီးအောင်တို့ အဖေ၊ အမေ၊ အဖိုးတို့ကတည်းက သည်မြို့နယ်လေးမှာနေခဲ့တာကိုး….။ တောင်ဥက္ကလာ ဆိုတဲ့ သည်မြို့နယ်လေးကလည်း….အရင်တုန်းက ခုလိုဘယ်ဟုတ်မလဲ….။ မြို့သစ်ဆိုတဲ့အတိုင်း ဖုန်တထောင်း…ဖုတ်တထောင်းထောင်းနဲ့ အိမ်လေးတွေ ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်ပဲ ရှိသေးဆဲပေါ့….။ အဲသည်ကတည်းက ဘကြီးအောင်တို့ အဖိုးတွေက သားသမီးတွေနဲ့ မြို့သစ်ကလေးမှာ နေလာခဲ့ကြာတာ လေ။ ဘကြီးအောင်ကြီးလာတဲ့အထိပဲ… ။ ကျောင်းပိတ်ရက်တွေ ၊ လသာတဲ့ညဘက်တွေဆို…. ဘကြီးအောင်ရဲ့ အိမ်ခြံဝန်းလေးထဲမှာ ကလေးတွေမှ တပြုံကြီး….။ ဗဟုသုတ ပုံတိုပတ်စလေးတွေ ပြောတတ်တဲ့ ဘကြီးအောင်နားမှာ ကလေးတွေ ၀ိုင်းနေတာပေါ့…။ မိုးအကုန် ဆောင်းအကူး မြောက်ပြန်လေအေးအေးတိုက် နေတဲ့….ညနေခင်းတစ်ခုမှာ…. ဘကြီးအောင် အရင်ကအကြောင်းတွေတောင် ပြန်စဉ်းစားမိနေသေးတယ်…..။ ကြာခဲ့ပါပြီဆိုတော့လည်း….. ဘကြီးအောင်တော့ အမှတ်ရနေတုန်း……။ (၈၈)ဆိုတဲ့ ခုနှစ်ကြီးတစ်ခုက အဖြစ်အပျက်တွေပေါ့……။ အဲသည်ခုနှစ်ကြီးကို ဖြတ်သန်းခဲ့တဲ့သူတွေလည်း ဘယ်မေ့မလဲ..။ ဘကြီးအောင်လည်း ခုထိအမှတ်ရတုန်းပဲ…။ ခုခေတ်ကလေးတွေကိုတောင် ဒီအဖြစ်တွေကို ဘကြီးအောင် မပြောပြရသေးဘူး…..။ ပြန်ပြောရင်တောင် မယုံရင်….ပုံပြင်မှတ်လို့…ဆိုပြီး ဘကြီးအောင်ပြောရဦးမှာ….။ ရောက်နေတဲ့ခေတ်ကာလကြီးကလည်း အိုင်တီခေတ်တဲ့….. စာအုပ်တွေဖတ်တော့လည်း ဘကြီးအောင်တော့ နားလည်ပါတယ်….။ တစ်ခါတစ်ခါ….. သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေ အမီလိုက်နေရတုန်းမဟုတ်လား….။ ပြက္ခဒိန်က သက္ကရာဇ်ကိုကြည့်လိုက်တော့လည်း (၂၀၃၅)ခုနှစ်တောင် ရောက်လို့နေပြီ…..။ (၈၈)ခုနှစ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေက ဘကြီးအောင်အတွေးတွေကို နောက်ပြန်ဆွဲနေတုန်း………။
"ဟဲ့...ဟိုမှာ ... ဟိုမှာ...အမေရ...သမီးကြောက်တယ်..." မီမီ၏ အသံစူစူးသည်.. အားလုံးကို လန့်ဖျန့်သွားစေသည်... မီမီညွှန်ပြရာ အားလုံ...
အနာဂတ်ကောင်းကင် စကားပုံပြိုင်ပွဲ ဒီစကားပုံပြိုင်ပွဲလေးကို ကျွန်တော်ဝင်ပါဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့စဉ်က လွယ်မယ်ထင်ထားခဲ့တာ။ သေချာတွေးတော့ တော်တော်...
ဗုဒ္ဓစကား ရင်ထဲထားနိုင်ပါစေ (ဖြေရှင်းချက်မဟုတ်ပါ။)
မနေ့တစ်နေ့ကပဲ Facebook ရဲ့စာမျက်နှာတစ်ခုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကို ဘာသာရေးစော်ကားမှုပြုထားတဲ့ blogspotလင့်ခ်စ်ခုဟာ ပလူပျံနေခဲ့တယ်။ အဲသ...
ထိုစဉ်......အိမ်၏ထုပ်တန်းပေါ်မှ တစ်ခုခုကျလာသည်ကို ထူးဇင်တွေ့လိုက်မိသည်....... ဆေးပျယ်စပြုနေသော ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံ.......မျက်နှာခြမ်းက ပျက်...
ပန်းတစ်ပွင့်ရဲ့….. ရာဇ၀င် (ပြိုင်ပွဲဝတ္တု) ၂၀၁၂ခုနှစ် အေးစိမ့်စိမ့်မြောက်ပြန်လေတစ်ချက်က ပတ်ဝန်းကျင်းတစ်ခုလုံးကို ခဏတာတိုက်ခိုက်သွား...
၀ရုန်းသုန်းကားမဆန်တဲ့ လေပြေအချို့ ကျွန်တော့ခန္ဓာကိုယ်အား ဖြတ်သန်းကာ တိုက်ခတ်သွားကြသည်။ ညိုမှောင်ရီတဲ့ ရာသီဥတုက အရှိန်ယူကာသည်းကာမည်းကာ ရွာ...